Heerka burburi Candy 1442 Khiyaamada iyo tabaha - Ciyaarta Suugaanta Shumaca - Talooyin Khayaanada Nolosha Bilaashka ah Tilmaamaha
halkan ayaad joogtaa: Guriga / Ciyaarta Suugaanta Shumaca / Heerka burburi Candy 1442 Khiyaamada iyo tabaha
Qandhada Candy Crush ma dhacayso wakhti dhow, iyo sida dadku u sii gaadhaan heerar sare, xamaasaddoodu kor ayay u sii kacaysaa. Waa loop xun laakiin hab madadaalo leh. Heerarka adag waa qayb ka mid ah ciyaarta, sidaas awgeed waxaan u hindisnay qoraalkan si aan kuu siino Heerka Nacnaca 1442 Khiyaamada iyo tabaha!
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee ku saabsan Crush nacnaca ayaa ah in heerarka sare ay leeyihiin astaamo u gaar ah oo aan si fudud loo xallin. Tani waxay fursad siinaysaa ciyaartoyda joogtada ah iyo kuwa xiiseeya inay kasbadaan tartan ka sarreeya dadka guud ahaan. Dhaqdhaqaaqa u muuqda mid fudud iyo libinta guuleysiga ayaa caqabad ku ah marka ciyaartoyda ay la kulmaan ujeedooyin dhab ahaantii adag oo kaa dhigaya inaad isticmaasho noggin.
Weli, ciyaarta ayaa ugu fiican sida ay tahay; hadda, iyada oo aan la sii adkaysan, aan si toos ah u qodno.
Ujeedada heerka-1442 ee Candy Crush Saga waa in la ururiyo hal hazelnut iyo hal cherry.. Waa tan qabashada, waa inaad ku samaysaa kaliya 20 dhaqaaqdo; dusheeda, there are two locks that need to be unlocked and there are jelly makers at the bottom that keep spawning jellies to block your path. The collection points are at the bottom and getting the ingredients there has proven out to be one hectic task.
Dableyda sharka ah ayaa si joogto ah u miiqaya oo sii daaya jelliyada marka ay buuxaan. Waxay u baahan yihiin in si joogto ah loo carqaladeeyo oo isku mar la burburiyo si silsilad fal-celin ah si loo sameeyo waddo ay maaddooyinka dhex maraan..
Heerka burburi Candy 1442 Talooyin iyo Tabaha:
Inkasta oo heerku adag yahay oo uu qaadan karo dhowr isku day ka hor inta aanad dhaafin, Waxaan rajeyneynaa in talooyinka aad hoos ka heli doonto ay kaa caawin doonaan inaad heerkan ka gudubto dhowr isku day intii suurtagal ah.
Diiradaada saar kuwa sharka leh. Ku soo dhowow iyaga ama isticmaal nacnac la siibay oo kor u kaca si aad u carqaladayso. Saddex jeer isku mar qasmay, waxay joojin doonaan dhalmada.
Hubi inaad furaha nacnaca ku fur laabta qufulan. Tani waxay ku siin doontaa laba taayirood oo qumbaha ah oo aad u leexan karto bidix iyo midig si aad u samayso nacnac xariijimo ah si aad u carqaladayso shimbiraha sharka leh..
Maadaama ujeedadu tahay in la ururiyo maaddooyinka, isku day in aad nadiifiso xabagta hoose adigoo shan jeer garaacay.
Tani waxay bilaabi doontaa falcelinta silsiladda oo dhammaan xabaalaha waa la burburin doonaa.
Ku ciyaar hoosta halkii aad ka ciyaari lahayd dusha sare. Tani waxay fursad u siin doontaa dhaqdhaqaaqyo cusub iyo fursado lagu abuurayo nacnac gaar ah.
Isha ku hay tirada dhaqaaqa ee hadhay. Qaladaadka ugu weyn ee ay ciyaartoydu galaan waa in ay si aad ah u lumiyaan ciyaarta oo aanay xataa garan karin marka ay ka maqan yihiin dhaqdhaqaaqyada..
Haddaad awoodid, markaa waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho nacnacyo gaar ah oo aad dooran kartid bilowga. Maadaama aad leedahay dhaqdhaqaaq xaddidan, laga yaabaa inaad xoog ku bilowdo ha u malayn?
Marka, waxaas oo dhami maaha mid adag? Halaag bakhtiiye, laabta nacnaca furan, ururiyo cherry iyo hazelnut, waana ku fiican tahay inaad tagto. Ilaa waqtiga xiga, macaan joog!!!